फेस कभरिङहरू (अनुहार छोप्ने कपडाहरू) | Face Coverings (Nepali) | Multnomah County
फेस कभरिङहरू (अनुहार छोप्ने कपडाहरू) | Face Coverings (Nepali)
अगस्त 5, 2020 मा अद्यावधिक गरिएको
तपाईंलाई बाहिर जान आवश्यक पर्छ भने, तपाईंले अन्य व्यक्तिहरूबाट6फिटको दूरी कायम राख्न नसकेको जुनसुकै समयमा कपडाको फेस कभरिङ लगाउनुहोस्। उदाहरणको लागि, भण्डार पसल, भिडभाड फुटपाथ वा सार्वजनिक ट्रान्जिट।
फेस कभरिङ लगाउनाले तपाईंको स्वास्थ्य र तपाईंको नजिकमा रहने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नमा मद्दत गर्दछ।
जून 24 देखि, मल्टनोमाह काउन्टीभरिका इन्डोर (भवनभित्रका) सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार छोप्ने कपडाहरू अनिवार्य लगाइनुपर्छ । यो आवश्यकता5वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र अनुहार छोप्ने कपडा लगाउन नमिल्ने चिकित्सकीय समस्या वा अपाङ्गता भएका मानिसहरूमा लागू हुँदैन ।
कपडाको फेस कभरिङ शारीरिक दूरीको प्रतिस्थापन भने होइन:
सम्भव भएसम्म घरमै बस्नुहोस्
सार्वजनिक स्थलमा आफू र अन्य व्यक्तिहरू बीच6फिटको दूरी कायम राख्नुहोस्
आफ्नो अनुहार नछुनुहोस्
खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा छोप्नुहोस्
आफ्ना हातहरू धुनुहोस्
तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने, घरमै बस्नुहोस् र अन्य व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नको लागि उनीहरूबाट टाढा रहनुहोस्
अब ओरेगनमा काम गर्दा कर्मचारी, ठेकेदार र स्वयंसेवकहरूलाई फेस कभरिङ लगाउन आवश्यक हुन्छ। व्यवसायमा पनि ग्राहकहरूले कर्मचारीहरूको सुरक्षाको निम्ति फेस कभरिङ लगाउन आवश्यक पर्न सक्छ।
ओरेगनको फेस कभरिङ सम्बन्धी नियमहरू
तपाईंसँग आफ्नो रोजगारदाता र फेस कभरिङहरूको प्रयोगको बारेमा चिन्ता छ भने, ओरेगन सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रशासन (OSHA) लाई 800-922-2689 मा फोन गर्नुहोस्।
कपडाको फेस कभरिङको प्रयोग कसरी गर्ने
कपडाको फेस कभरिङ लगाउँदा, निम्न कार्यहरू गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्:
यो लगाउनुअघि र यसलाई छोएपछि वा यो निकालेपछि आफ्ना हातहरू सफा गर्न
यो लगाउन र निकाल्नको लागि टाइ वा इयर लुपहरू प्रयोग गर्न
तपाईंको मुख र नाक पूर्णरूपमा छोपिएका छन्
यो कुनै ग्याप बिना अनुहारको छेउतिर आरामदेह ढंगले फिट हुन्छ
तपाईं अझैपनि राम्रोसँग श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ
कपडाको फेस कभरिङहरूले चिलाउन सक्छ। आफ्नो नाक वा मुख छुनको लागि यसको मुनिबाट हात नलैजानुहोस्।
यसलाई प्रत्येक प्रयोगपछि साबुन र तातो पानीले धुनुहोस्।
राम्रोसँग कसिएको र कपडा मोटो भएमा, यो तपाईंको अनुहार राम्रोसँग फिट हुनेछ र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। यो धेरै मोटो हुनुहुँदैन अन्यथा यो असहज हुनेछ।
फेस कभरिङ छनोट गर्ने समयमा, निम्न कुराहरू हेर्नुहोस्:
कसेर बुनेको, बिस्ताराका तन्ना, पर्दा, बुनेको सर्टहरू जस्ता 100% कपासका कपडाहरू
कम्तीमा2वटा तह भएको
तपाईं यसमार्फत श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
यसलाई ठाउँमा अडाउनको लागि इलास्टिक लुप वा टाइहरू
आरामदायी फिटको लागि सिलाएको, धुन योग्य धातुको नघ टुक्रा (प्लास्टिक लेपित कागजको क्लिपले काम गर्छ)
केही फेस कभरिङहरूमा कपडाको इन्टरफेसिङले बनेको एक वा सो भन्दा बढी फिल्टर तहहरू पनि हुन्छन्। तपाईंले कफी फिल्टरलाई धुनको लागि हटाउन सक्नुहुन्छ भने यो ठीक हुन्छ। भ्याकुम क्लिनर झोलाहरू जस्ता HEPA फिल्टर सामग्रीहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्। यिनीहरू विषाक्त हुन सक्छन्।
तपाईंको लागि उत्कृष्ट शैली पत्ता लगाउने परीक्षण। तपाईं इलास्टिक इयर लुपहरू लगाउन सक्नुहुन्छ? वा तपाईं आफ्नो टाउकोको वरिपरि टाइहरू लगाउन चाहनुहुन्छ?
यदि आफ्नै बनाउने हो भने, पहिले ने सहजै उपलब्ध हुने सामग्रीहरू (पुरानो तन्ना, सर्ट, बन्दना, टि-टावेलहरू) प्रयोग गर्नुहोस्। ¼” इलास्टिक र कपडाको इन्टरफेसिङ जस्ता केही सामग्रीहरू पसलहरूमा फेला पार्न कठिन हुन सक्छन्।
घरेलु कपडाको फेस कभरिङ (CDC) कसरी बनाउने
सर्वसाधारणले चिकित्सा मास्क वा N95 रेस्पिरेटरहरू लगाउनु हुँदैन।
स्वास्थ्य स्याहार कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रहन र आफ्नो काम गर्नको लागि यी चिकित्सा मास्कहरूको आवश्यकता हुन्छ।
चिकित्सकीय मास्कहरू सीमित आपूर्तिमा हुन्छन् र हामीले यिनीहरू फ्रन्ट लाइन स्वास्थ्य स्याहार कार्यकर्ताहरूका लागि मात्र हुन् भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ।
कसले फेस कभरिङ लगाउनु हुँदैन
केही मानिसहरूले स्वास्थ्य अवस्था, उमेर वा क्षमताका कारण फेस कभरिङ लगाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
2 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूले वा आफै कभरिङ निकाल्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्तिले फेस कभरिङहरू लगाउनु हुँदैन।
भेदभाव कानूनको विरूद्ध छ
सबैजना उनीहरूले फेस कभरिङ लगाए वा नलगाए पनि सम्मानका लागि हकदार हुन्छ।
काला, आदिवासी र रङ समुदायहरूका मानिसहरूका लागि हिंसा र भेदभाव एक दैनिक अनुभव हुन्छन्। फेस कभरिङहरू लगाउने काला, आदिवासी र रङ भएका मानिसहरू प्रति जातियता र जातिवादी प्रतिक्रियाहरू हाम्रो वर्तमान वातावरणको वास्तविकता हुन्। र अहिलेसम्म फेस कभरिङहरूले मानिसहरूलाई स्वस्थ रहन र जीवनहरू बचाउनमा मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। Multnomah काउण्टीले व्यक्तिहरूको जाति, जातियता वा पहिचानको आधारमा भेदभाव वा हिंसा सहन गर्दैन।
Multnomah काउण्टीले कपडाको फेस कभरिङ र चिकित्सकीय मास्कहरू दुवैको दानहरू स्वीकार गरिरहेको छ।